Karnalikhabar » के हो कोशी व्यारेज ? जसले वर्षेनी रुवाउँछ नेपालीलाई के हो कोशी व्यारेज ? जसले वर्षेनी रुवाउँछ नेपालीलाई – Karnalikhabar
प्रकाशित मिति :2017-08-13 09:56:58
कोशी नदीमा निर्माण गरिएको व्यारेज नेपालका लागि अभिषाप सावित भएको छ । तराई क्षेत्रमा वर्षातका बेला डुबान हुनुको प्रमुख कारण कोशी व्यारेज हो । व्यारेजका ढोका नेपालले खोल्न नपाउँदा लाखौँ जनताको घरघरमा बाढी पस्ने गरेको छ । नेपाली भूमिमै बाँध निर्माण गरिएको भएपनि कोशी व्यारेजको सञ्चालन, रेखदेख लगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भारतको हातमा छ । कोशी ब्यारेजमा ५६ वटा ढोका छन् । बाढीले नेपाली क्षेत्र जलमग्न हुँदा पनि भारतले मुश्किलले ३० वटा मात्रै ढोका खोल्न गरेको छ ।‘बर्खामा ब्यारेजका सबै ढोका खोल्ने हो भने सिंगो बिहार डुब्छ । सोही कारणले भारतले सबै ढोका खोल्दैन । ढोका नखोल्दा नेपाल डुब्ने गरेको छ । ढोका खोल्ने वा नखोल्ने सबै अधिकार भारतको हातमा छ । नेपाली पक्षको अविवेकी सम्झौताको कारणले हरेक वर्ष नेपालले कोशीको विपत्ति सहनुपरेको हो ।
३० मिटर अग्लो ब्यारेज बनाएको भएपनि अहिले चाहिँ बालुवाले पुर्दा उक्त ब्यारेजको गहिराइ मुश्किलले १५ मिटर रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
कोशी ब्यारेजको पानी नेपाल र भारत दुवै पक्षले प्रयोग गर्ने कोशी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वी नहरको पानी भारतले र पश्चिमी नहरको पानी नेपालले प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर हिँउदको बेलामा सबै पानी भारतले प्रयोग गर्दै आएको छ । पूर्वी नहर होचो र पश्चिमी नहर अग्लो बनाइएको कारणले हिँउदको सम्पूर्ण पानी भारतले प्रयोग गर्छ ।